बुर्तिबाङमा खाने पानीको हाहाकार ! पानी भर्न धारामा आउने पधेर्नीलाई सास्ती ! – ebaglung.com
बुर्तिबाङमा खाने पानीको हाहाकार ! पानी भर्न धारामा आउने पधेर्नीलाई सास्ती !
२०७४ जेष्ठ ३१, बुधबार १५:४२	Home Slider, Top News, थप समाचार
बिमल खड्का, बुर्तिवाङ २०७४ जेठ ३१ । बुर्तिवाङ बजारमा पिउने पानीको अभावले बजारवासीले समस्या झेलिरहेका छन् । बर्खा लागे पनि पानीको मुहानमा मुल नपलाएकोले पानीको अभाव हुन थालेको हो ।
पानीको मुहान सुक्दै जाने र बुर्तिबाङ बजारमा जनसंख्या चाप बढ्दै गएका कारण पिउने पानीको समस्या बढ्दै गएको स्थानीयले बताएका छन्। बुर्तिवाङ बजारमा चुरेलाबासको छरछरे र कोईराला भन्ने स्थानबाट पानी आपुर्ति गरिदै आएको छ ।
अहिले बुर्तिवाङ बजारका सार्वजनिक धाराहरुमा पधेर्नीहरु गाग्री लिएर पालो पर्खिरहेका दृश्यहरु देख्न सकिन्छ । पधेर्नीहरुले पालो पर्खदा पर्खदै धारामा पानी झर्न बन्द भएपछी रित्तै गाग्री लिएर फर्किनु परेको बताउदै खाना पकाउन पनि समस्या भएको बताउछन् । उता बुर्तिवाङ खानेपानी आयोजनाले व्यक्तिगत तवरले वितरण गरेको पानीको धारामा पनि विहान एकैछिन पानी आउने गर्दा पानीको गर्जो नटर्ने उनिहरुको गुनासो रहेको छ ।
बनजङ्गल बिनास तथा पानीको मुहानको संरक्षण नहुदा पानीको समस्या बढ्दै गएको स्थानीयको भनाई छ । बुर्तिवाङ बजारमा आपुर्ति हुने पानीको मुहानबाटै खेतीपातीका लागि स्थानीयले पानी लग्दा पानीको अभाव भएको बुर्तिवाङ खानेपानी आयोजनाका सम्वध व्यक्तिहरुले बताउने गरेका छन् ।
बढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वका कारण प्रयाप्त पानीको आपुर्तिका लागि बैकल्पिक श्रोतको खोजीमा ढोरपाटन नगरपालिकाको ध्यान जानु जरुरी रहेका उपभोक्ताहरुको माग रहेको छ । झण्डै १० वर्ष देखी कामगर्दै आएको बुर्तिवाङ खानेपानी आयोजनामा सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उपभोक्ताहरुले माग गरेका छन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग एकतर्फी सन्चालनमा
कालीगण्डकीमा हामफाली बेपत्ता भएका सुनिल पुनको ९ दिनमा शव फेला !
२०७६ कार्तिक २९, शुक्रबार १९:३६
बागी उमेदवार उठाउन प्रपन्च रच्ने षडयन्त्रकारीहरुकै शिकार बने त, तुलसीराम अर्याल/दधिराम अर्याल ?
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार १६:०१
काँग्रसी उमेदवार जीत शेरचन भन्छन् – विकास ,रोजगारी, शिक्षा र समृद्धि पहिलो प्राथमिकता !
गुल्मीको सिद्धबाबा माबिमा साईवर सुरक्षा र अपराध बारेमा प्रशिक्षण !
२०७६ कार्तिक २९, शुक्रबार २२:१०
रामकृष्ण कँडेल, गुल्मी २०७६ कात्तिक २९ । रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं ८ स्थित श्री सिद्धबाबा माबि मा साईबर सुरक्षा र…
२०७६ कार्तिक २९, शुक्रबार २०:५२
निर्वाचनमा कसैको व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी नहोस !
२०७६ कार्तिक २९, शुक्रबार २०:३७
भारतीय बिस्तारवाद बिरुद्ध तरुण दलले निकाल्यो हटियामा राँके जुलुस : ओली सरकारको राजिनामा माग !
२०७६ कार्तिक २९, शुक्रबार २०:१२
काँग्रेसको चुनावी अभियान भाषण भन्दा बढि घरदैलोमा केन्द्रित : निसी र तमानमा महिला प्रचार समिति गठन !
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार १९:४२
प्रदेश मन्त्री लम्सालव्दारा ताराखोलामा रेन्बो ट्राउड होम स्टेको उद्घाटन !
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार १५:०६
बागलुङ बजारमा जडान गरिएका सबै सीसीटीभी काम नलाग्ने ! सीसीटीभी केमराको अपरिहार्यतालाई महसूस गरी जडान गर्ने पहलमा छु – एसपी भट्ट
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार १२:१९
अपडेट : चन्द्रकोट हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका दुवै अभियुक्त गल्कोट- ८ थालेपाेखराका काका-भतिजा !
२०७६ कार्तिक २८, बिहीबार ११:४७
पर्वत अस्पतालमा वच्चाको विशेष उपचार कक्षको स्थापना : वच्चाहरुले विशेष उपचार स्याहार पाउने !